China JT-AEC2361a Uthotho lwekhaya lwegesi enokutsha ngabavelisi kunye nabanikezeli |Isenzo
I-1) Uyilo olulula: isitayile sasekhaya esilumkileyo, esihle kunye nesicwebileyo, esithathwe ngaphandle kwe-ABS ephezulu, ukuhambelana kombala ngesisa, kulula ukuhambelana nendawo yasekhitshini;
2) Iigesi ezahlukeneyo zokubona: imethane kunye nepropane inokubonwa ukuhlangabezana neemfuno zokubeka iliso kwiindawo ezahlukeneyo kunye nemithombo eyahlukeneyo yegesi.;
3) Ukusebenza okuphezulu kokuchasana nokuphazamiseka:ti-membrane yokucoca i-sensor ifakwe ukuxhathisa utywala kunye nomphunga wamanzi.Ngokukhusela inzwa ngokwayo kunye nokwandisa ubomi benkonzo, iphucula kakhulu imveliso yeendleko-ukusebenza kwaye izisa amava omsebenzisi azinzile.Ngomsebenzi obalaseleyo wokuchasana nokuphazamiseka, impendulo ebuthathaka kakhulu kwigesi yendalo;
4) Uvakalelo oluphezulu: ixesha lokuphendula<9s (t90), ilumkisa ngokukhawuleza, kwaye iqinisekisa ukhuseleko lokusingqongileyo kwerhasi yasekhaya;
I-5) Indlela yokuphuma: iindlela ezimbini zokukhupha, ezinokuthi zilawule i-manipulator kunye nezinye izixhobo ezilungiselelwe (i-valve ye-solenoid yasendlini / i-fan exhaust) ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abahlukeneyo.;
6)Ukhetho eunxibelelwano oluthe kratya: umsebenzi wonxibelelwano unokwandiswa ngemodyuli yeWiFi yangaphandle ukuqonda imfuno yonxibelelwano phantsi kwemeko ethile yenethiwekhi.Inokubekwa esweni kude ngeefowuni eziphathwayo, kunye nezaziso zeSMS zinokuthunyelwa xa kuvuza igesi, njl.
Umgaqo wokufumanisa Semiconductor
Imowudi yokubona Di-iffusive
Iigesi ezinokubonwa Nigesi yangaphandle
Ugxininiso lwe-alam 8I-%LEL
Ixesha lokuphendula ≤9s(t90）
Umbane osebenzayo AC187V~AC253V(50Hz±0.5Hz）
Ukutya umbane ≤3W
Ubushushu bokusebenza -10℃~+55℃,Ubuntu bezizalwane≤93%±3%
Isiphumo 1 iseti okanye 2isetis yemveliso yoqhagamshelwano, imo yemveliso iyakhethwa. I-Pulse output DC12V, i-passive idla ngokuvula ufikelelo oluphezulu lwe-2A yangoku, umbane wofikelelo oluphezulu DC30V/AC250V
Pibakala logcino IP30
Drop ukuphakama 1m
Cindlela yokuthetha Imodyuli yangaphandle,GPRS/NB-IoT/WiFi/LoRa/Bluetooth azikhethele
Ukuodola kwiTheyibhile yoKhetho
Irhasi iza kubhaqwa
Iziphumo ezimbini: i-pulse output + passive iqhele ukuvuleka
Nceda ucacise i-voltage yokusebenza, iimfuno zemveliso kunye nobude bomgca wokuphuma (ubude obuqhelekileyo yi-25cm) xa ubeka umyalelo.
Iziphumo ezimbini: inqanaba le-DC12V le-manipulator + i-pulse output
Nceda ucacise i-voltage yokusebenza, iimfuno zemveliso kunye nobude bomgca wokuphuma (ubude obuqhelekileyo yi-25cm) xa ubeka umyalelo.Iigesi ezifunyenweyoazikhethele.
Nceda ucacise i-voltage yokusebenza, iimfuno zemveliso kunye nobude bomgca wokuphuma (ubude obuqhelekileyo yi-25cm) xa ubeka umyalelo.Iigesi ezifunyenweyokwayeIimodyuli zeGPRS/NB-IoT/WiFi/LoRa/Bluetooth zonxibelelwano ezingenazingcingo zikhethwa.
Ngaphambili: I-BT-AEC2386 Isixhobo esiphathwayo seGesi esitshayo
Okulandelayo: I-AEC2301a Umqondiso we-Alarm ye-Alarm yegesi evuzayo
Isikhangeli segesi se-lpg, umtshini wegesi osisigxina, umtshini wegesi onokutsha, isixhobo segesi, China Gas Detector, IAlam yerhasi etshayo,